के तपाई पनि आफ्नो जीवन मा उदासी मह्सुस गर्नुहुन्छ ? के तपाई को जीवन मा केही नयाँ भैरहेछैन ? के तपाईंले आफ्नो जीवनमा दुखी भएको मह्सुस गर्नु भएछ ? येदि तपाईं को जवाफ “हा” हो भने यो लेख तपाईंकै लागि हो ।
यो लेखमा मैले तपाईंलाइ केही काम बताउने छु। जुन तपाईंलाइ गर्नु पर्छ । येदि मैले बताएको सबै काम तपाईंले गर्नु भयो भने , बिश्वास गर्नुस तपाईंको जीवन बदल्न सक्छ । र तपाईंले आफ्नो जिवन मा ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ ।
सवभन्दा पहिलो काम तपाईंले तपाईंले एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्नुस र त्यही लक्ष्य प्राप्ति को लागि मिति पनि लेख्नुस । कि यो लक्ष्य मैले येहि मिति मा पूरा गरछु । येस्तो गर्नाले हामी भित्र एउटा असुरक्षा को भावना मह्सुस हुन्छ अनि हामी जोर सित काम गछौ र लक्ष्य कम समय मा पुरा भैहलछ ।
अब यो निर्धरित लक्ष्य प्राप्त गर्न को लागि रणनीति तयार गर्नुस कि यो लक्ष्य येसरी पुरा हुन्छ ।
यो सब भैसके पछी आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति को लागि काम सुरु गर्नुस् । दोस्रो काम आफ्नो वरिपरि को वातावरण सफा गर्नुस ।
येस्को आर्थ तपाईं को जीवन मा प्रयोग न हुने कुर आफू भनदा टाढा रख्नुस । नकारात्मक व्यक्तिहरु बाट टाढा रह्नुस । अनि सकारात्मक व्यक्तिहरु को संगत गर्नुस । तेस्रो काम , आफू भित्र परिवर्तन ल्याउनुस । तपाईंले आफू भित्र मन्सिक र भौतिक परिवर्तन ल्याउनुस । साथै आफ्नो काम गर्ने तरिकामा बदलाव लाउनुस । या ता कुनै नयाँ काम गर्नुस् वा सिक्नुस । येस्तो गर्दा तपाईं को जीवन मा नयाँ वद्लाब आउछ ।
चौथो काम यो गर्नुस कि आफ्नो हरेक दिनको काम एउटा कपिमा लेख्नु । र तपाईं भित्र कतिको बद्लाव आएको छ , त्यो पनि लेख्नुस ।
पचौ काम तपाईंले स्वास्थ खाना खानुस । साथै वातावरण र प्रकिर्तीलाइ मह्सुस गर्नुस । मान्छेहरु संग माया गर्नुस । येदि यी सबै कुरा तपाईंले राम्रो संग गर्नु भयो भने तपाईं को जीवन एकदम परिवर्तन भैहलछ ।
– Aditya Kumar Patel
2 thoughts on “जीवन परिवर्तन गर्ने पाँच मूल मन्त्र”
Pingback: परिवर्तनका लागि युवा नेपालको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय रजहरलाई पुस्तक
ShareTweetSharePin0 Shares हाम्रो वरिपरि कतिपय यस्ता मान्छेहरु छन् । जुन कि वर्सौ वर्ष देखि एउटै Position मा बसेका छन् । उनीहरुको नत Promotion हुन्छ , नत salary बढछ । र येस्तो अरु मान्छेहरु पनि छन् । उनीहरु संग ठुलो डिग्री पनि हुदैन तर पनि तिनीहरुले थोरै समयमा Ptomotion पाइहल्छन् । […]
bishal baniya 1 year ago 9